कुरैकुरा | manka kura
Archive for the ‘कुरैकुरा’ Category
प्रबिधिको फड्को मराइ
अप्रील 8, 2015
अहिले प्रबिधिको फड्को मराइले बिश्वका कुनै पनि कुनामा रहेका आफन्तसंग सम्पर्कमा आउन हामीलाई दुई सेकेन्डभन्दा वढी समय नलाग्न सक्छ । विकसित डिजिटल प्रविधिबाट कुरा मात्र होइन, आमने सामने भएर वा मुख हेराहेर गरेर कुरा गर्न सकिन्छ । लामै भलाकुसारी र कुनै विषयका ’boutमा तर्कपूर्ण छलफल चलाउन भाइबरबाट निःशुल्क सेवा प्राप्त छ । अहिले संसार हत्केलामा अटाउने भइसक्यो । शर्त हो, प्रविधिसंग रमाउन सिक्नु र सक्नु । संसारका ’bout कुनै पनि कुरा जान्न बुझ्न, हेर्न थाहापाउन गुगल मार्फत खोज गर्न सक्नु हुन्छ । तपाईलाई कुनै पनि खाने कुरा बनाएर खान मन लाग्दा कसरी बनाउने, के के चाहिन्छ सबै कुरा थाहा पाउन सक्नु हुन्छ । घर सजावटका लागि सल्लाह सुझाव लिन सक्नु हुन्छ । कुनै पनि रोग कसरी लाग्छ, त्यो रोगका लक्षण के हुन् र उपचार प्रविधि के के हुन् तुरुन्त थाहा पाउन सकिन्छ , संसारका धेरै कृतिहरु र तिनका रचनाकारका ’boutमा जान्न, बुझ्न र पढ्न सकिन्छ । केवल तपाईसंग डिजिटल प्रविधि र इन्टरनेट हुनु आवश्यक छ । तपाई गर्भावस्था हुनुहुन्छ भने गर्भ रहेदेखि बच्चा जन्मने दिनसम्मको यावत कुरा थाहा पाउन सक्नु हुन्छ । गुगल भन्ने यस्तो जिनिस आइदिएको छ ,जसले तपाइंलाई जान्न चाहेको कुनै पनि कुरा क्षणभरमै जानकारी गराइहाल्छ ।
अहिले धेरै विद्धानहरुले भन्ने गरेका छन्, सोसल मिडिया ( सामाजिक संजाल ) पनि लोकतन्त्र जस्तै हो । प्रजातन्त्रमा जस्तो लोकतन्त्रमा बोल्न मात्र पाइने हैन बोलेको कुरा सम्वन्धित निकायले सुन्न पनि पर्छ । बोलेका कुरा नसुनिने हो भने त्यो लोकतन्त्र हुन सक्दैन । सामाजिक सन्जालले पनि सामाजिक, राजनीतिकदेखि जनचासोका बिषयमा अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ । सामाजिक सन्जालमा आएका कुराहरुमाथि निर्धक्क भएर आफना विचार सुझाव, आलोचना दिन कसैले रोक्न सक्दैन । अहिलेको डिजिटल प्रविधि मार्फत हामी आफना विचार चेतनाबाट आम मानिसलाई घच्घच्याउन सक्छौं । त्यसैले अहिलेको सामाजिक सन्जाललाई हामीले पाएको लोकतन्त्र नै मान्नु पर्छ । त्यसैले यसको फड्को मराइ पनि बहुदलीय प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रसंगै केही फड्को मारेको पाइन्छ ।
नेपालका दुर्गम बिकट गाउंका बस्तीमा ताररहित इन्टरनेट सन्जालको बिस्तार गरी साक्षर पार्ने, सूचना प्रविधिको विकासका लागि लागिपरेका माहावीर पुनलाई इन्टरनेट सोसाइटीले २०१४ को जोनाथन बी पोस्टल अवार्ड दियो । उनले यसभन्दा अघि पनि एसियाको नोबेल पुरस्कारका रुपमा चिनिने रोमन म्यागासेस पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए । अहिले उनले नेपालका १५ जिल्लाका १७५ गाउंमा ताररहित इन्टरनेट सन्जालमा जोडिरहेका छन् । राज्यको दायित्वभित्र पर्ने कुरा उनको अगुवाइमा अगाडि बढिरहेको छ, अब राज्यले उनलाई थप उत्साहित पार्नुपर्छ ।
तपाइं डिजिटल प्रविधिमा अभ्यस्त हुनुहुन्छ भने तपाइं आफना लेख छपाउन कुनै सम्पादकका छेउ पुगेर आफना दांत देखाउनु पर्दैन । घरमै बसेर मेलबाट पत्रपत्रिकामा लेख रचना पठाउन सक्नु हुन्छ । समसामयिक र प्रकाशनयोग्य कुरा पत्रिकाहरुले नछाप्ने कुरै हुंदैन । छापिदिएनन् भने डिजिटल प्रविधि मार्फत सामाजिक सन्जालका पाठकबिच राख्न र आफने विचार पोख्न तपाइंलाई कसैले रोक्दैन । डिजिटल प्रविधिले पुस्तक प्रकाशन गर्ने काममा एउटा क्रान्ती नै ल्याएको छ । घरमै बसेर पुस्तकको रुप तयार पारेर पीडीएफ फाइलमा पठाउने बितिक्कै छापाखानाले पुस्तक छाप्न सुरु गरी हाल्छ ।
परिवर्तनको राजनीति गर्ने नेताहरुका लागि पनि अब डिजिटल प्रविधिबाट टाढा रहनु हुंदैन, अहिलेका धेरै युवा पुस्तालाई यससम्वन्धी राम्रो ज्ञान छ, किनकि उनीहरु त्यही वातावरणमा हुर्किरहेका छन् । अवसर पाएका आजका बालबालिका सन्चार र प्रविधिका कारण धेरै तीक्ष्ण बनिसकेका छन् । ज्ञानज्ञुनका कुरा थाहा पाउन यो प्रविधि उपयोगी माध्यम बन्न सकेको छ । अपवादका केही घटनाबाहेक ।
अघिल्ला पुस्ताले पनि अहिलेसम्म चलाइएन भनेर हीनताबोध संगाल्नु आवश्यक छैन । यसले विश्वसंग तपाइंलाई नजिक्याउंछ । मिनेट सेकेन्ड या किताबका पाना पल्टाउने समयमै तपाइंले धेरै कुारा’bout जानकारी पाउन सक्नु हुन्छ । बिश्व परिस्थिति बुझ्न सजिलो पर्छ । आफ्ना विचार सेयर गर्न सक्नु हुन्छ । ६४ वर्षीय भारका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फेसबुक, ट्विटरलगायत सामाजिक सूचना प्रविधिमा अभ्यस्त छन् । नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई पनि यस क्षेत्रमा अगाडि नै देखिन्छन् । साहित्यकार प्रदीप नेपालले यस्तो प्रविधि धेरै पहिलादेखि चलाउंदै आएका छन् । त्यसैले उनीहरुका कुरा अरुले र उनीहरुप्रतिको मानिसको धारण तुरुन्त थाहा पाउन र दिन सक्छन् । विचारको माध्यमबाट जोडिन चाहनेहरु अहिले सामाजिक सन्जालमा एकअर्कालाई आफ्नो कुरा सुनाउन र सुन्न लागिपरेका छन् ।
केटाकेटीलाई डिजिटल प्रविधिसंग नजिक्याउनु आमाबाबु र संरक्षकहरुको कर्तव्य हो । तपाइं आफना बालबालिकालाई डिजिटल प्रविधिसंग टाढा राख्नु हुन्छ भने तिनले भोलिका दिनमा प्रतिस्पर्धामा उत्रन पछि पर्न सक्छन् । आफना सन्ततिको भविष्य उज्ज्वल मात्र होइन अन्यसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउन, सक्षम सबल बनाउन पनि अहिलेको बिश्वव्यापी यो प्रविधिबाट टाढाा राख्नु हुंदैन । आजको डिजिटल प्रविधिबाट टाढा रहेका हिजोका पुस्ता बिच ठूलो खाडल रहेजस्तै आजका बालबालिका डिजिटल प्रविधिमा अभ्यस्त हुन नसके धेरै पछि पर्ने निश्चित छ ।
अहिले नेपालले पनि हरक्षेत्रमा यस्तो प्रविधिको प्रयोग गर्दै छ, । अब अझ अग्रसर हुनु पर्छ । सम्झनुस् त हिजोको एसएलसीको रिजल्ट हेर्न लाठी खानुपथ्र्यो । आज प्रविधिको फड्को मराइले घरमै बसेर मोवाइल र फोनबाट छिनमा थाहा पाउन सक्छौं । सूचना प्रविधिका लागि विभिन्न निकायका वेबसाइटमार्फत तिनका गतिविधि थाहा पाउन छिनमै सक्छौ । विश्वले यस्ता प्रविधिबाट हाम्रा’bout बुझन सक्छन् । संसारको एउटा कुनाको मानिस अर्को कुनाकोसंग जोडिन सजिलो पार्छ । यसले समयको बचत, छिटो छरितो,पारदर्शिता र भरपर्दो काम गर्न मद्दत मिल्छ । सारातिर मानिसै दोडेर देख्न भेट्न नसकिने हुंदा सिसिटिभी जस्ता उपकरण बैड०क्, अड्डा अदालत, सरकारी कार्यालयमा मात्र होइन, सडक र सम्भाव्य खतरा बढ्न सक्ने वा घटना हुन सक्ने स्थानहरुमा यस्तो यन्त्र जड्दा स्वचालित रुपमा यसले काम गरिरहन्छ । अपाराधी मनस्थिति भएका मानिस कहां काहां घुमफिर गरिरहो छन् भन्ने कुराको जानकारी लिन र अपराधी छेउ पुग्न सम्वन्धित निकायलाई धेरै सजिलो पुग्छ । अनलाइन सेवाबाट सेवाग्राहीले घरमै बसेर धेरै किसिमका सेवा लिन सक्छन् । धारा पानी, टेलिफोन बिजुली, मालपोत राजस्व कर तिर्न टेन्डर भर्न, रकम बुझाउने आदि कामका लागि अड्डा अड्डा धाउनु पर्दैन । घरमै बसेर सबै कुरा थाहा पाउन र तिर्न सकिन्छ । स्थानीय निकाय, सरकारी कार्यालय आदिमा चाहिने फोटो, फोटोकपीलगायतका सामग्री चाहिंदा सेवाग्राही, अझ ज्येष्ठ नागरिकले पाएको दुःख देख्दा यस्ता प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने हो भने अब कुनै पनि सेवाग्राहीले दुःख पाउनु पर्दैन । सामान्य रकम स्थानीय निकाय वा सरकारी कार्यालयले खर्च गरेर निःशुल्क यस्ता सुविधा दिन सकिन्छ । बैंड०्कबाट बिद्युतिय कार्ड लिंदा पचासौ हजारसम्म लिन हातमा चेक लिएर बैंकमा लाइन बसिरहन पर्दैन । बजार हिंड्दा पैसाको अब बिटो बोकेर डरको मारे भएर हिंड्न पर्दैन । पसलमा किन्न जांदा सामान किनेर कार्ड घोटेर केही पैसा चाहिए लिन पनि सकिने व्प्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । त्यसका लागि तपाइले बैंकमा बचत गर्ने बानी बसाल्दै जानु पर्छ । अहिले बैंड०्किंड० क्षेत्रमा डिजिटल प्रबिधिले फड्को मारेझैं अन्य क्षेत्र कृषि, स्वास्थ्य भौतिक निर्माण, शिक्षा, यातायात आदि क्षेत्रमा पनि यसलाई लागु गर्न सके धेरै कुरा बिना झन्झटिलो तरिकाबाट थोरै समयमा लाभ लिन सकिन्छ । बिकसित देशहरुले यस्ता कुरालाई सामान्य बनाइसकेका छन् । हाम्रा दुवै उदयमान छिमेकी देश भारत र चीन आर्थिक क्षेत्रमा मात्र होइन, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पनि बिश्वलाई हांक दिने अवस्थामा पगिसके । हामीकहां पनि यस्ता फड्को मराइ र हाम्रो आनीबानी सुध्ंदै जाने , सबै सरकारी कार्यालयमा इन्टरनेटमार्फत सेवा पाउने गरी हरेक कुरा प्रबिधिमा ढाल्दै जाने हो भन देशले कांचुली फेर्न र दिनौं खाडी राष्ट्र्मा ओइरिने युवाशक्तिलाई रोक्न बल नपुग्ला र ?
कहां के भयो भनेर अब समाचार सुन्न एक घण्टा पर्खनुपर्ने आवस्था छैन । मोबाइल र इन्टरनेटको सुविधाले हामी छिन छिनमा खबरबाट अपडेट हुन सक्छौं । मोबाइल सेवा सुरु भएको आज डेढ दशक यता यसले ठूलो फड्को मारेको छ । राज्य राज्य , व्यक्ति व्यक्ति बिश्वको एउटा कुना र अर्को कुनाबीच तत्काल संवाद हुन थालेको छ । सांच्चै बिश्व आश्चर्यजनक ढंगले जोडिदै अगाडि बढेको छ । सन् २००७ तिर आज भन्दा आठ बर्ष अगाडी स्मार्ट फोन सार्बजनिक गर्दा अब यसले सबथोक परिवबर्त गर्ने छ भनेका थिए । नभन्दै आज स्मार्ट फोन एक्काइसौं शताव्दीको प्रविधिको अर्को फड्कोमराइ भएको छ । मानिसका दैनिक गतिबिधिमा यसको ठूलो सहयोग छ । त्यसैले हात हातमा मोवाइल पुगेको देखिन्छ । यससंगै नेपालले अब डिजिटल प्रविधि मार्फत इन्टरनेट सेवा सुविधा सबै क्षेत्रमा देखिने गरी लागु गर्दै अहिलेका स्कुले बिद्यार्थीहरुलाई समेत यससम्वन्धी चेतना फैलाउंदै यसलाई सर्बसुलभ पार्नु भोलिको नेपालको भबिष्य उज्ज्वल पार्नु हो ।
(आजलाई २०७१ कार्तिकको अंकमा युवामंचमा प्रकाशित मेरो लेखलाई ब्लगका मित्रसंग भेटघाट गर्ने जमर्कोका साथ टांसो गर्दै बिदा लिन्छु ।) जयब्लग ।
युवाको रोजाइ विदेश किन
अचेल पढेलेखेका युवाको चासो युरोप,अमेरिका तथा अस्ट्रेलिया भएको छ भने थोरै पढेका वा नपढेकाहरुको गन्तव्य भने खाडी मुलुका र मलेसिया हुने गरेको छ । हिजो लाहुरे बनेर भारतमा दरवान र कुल्ली काम गरेर नेपाल फर्कन्थे । लाहुरेको सुगन्धित तेल राखेर बनाएको जुल्फी कपाल र एकजोर सफा लुगा लगाएर गाउं पसेको देख्दा, उसका चकाचकका कुरा सुनेर हिजो धेरै लाहुरे बन्थे । अहिले विदेश गएर आएकाको तामाझाम र कुरा सुन्नुपर्ने अवस्था छैन । हिजो जस्तो चिठ्ठी पठाएर महिनौ कुरेर खवर सुन्नु र सुनाउनुपर्ने अवस्था छैन । अहिले प्रविधिको फड्को मराइले संसार सांघुरिएको छ । इन्टरनेटका माध्यमबाट स्काइप र फेसबुक जस्ता सामाजिक सन्जालले युवा जमातलाई विकसित देशले तानिरहेको छ । आफू संगैको साथीको उता चकाचक, उसले प्रयोग गरेका अत्याधुनिक डिजिटल डिभाइसहरुले यताको युवाको मन तुलबुल तुलबुल पारिरहेको छ । बिदेशमा छोराछोरी वा अन्य परिवार रहेकाको नेपालमा रवाफसंगै आर्थिक अवस्थामा केही भए पनि पुर्याएको सहयोगले सबैलाई आफना छोरा छोरीलाई भरिसक्य विदेशै पठाउने मोह बढ्दो छ । छोराछोरी यहां रहंदा वरालिन सक्ने, विदेश पठाइदिन पाए बिगं्रदैनन् भन्ने यी र यस्तै कारणले होला अहिले नेपालबाहिर कामका लागि पुगेकाको संख्या ७५ लाखभन्दा वढी नै रहेको तथ्याड०कले देखाउंछ । यसो हुनुमा नेपालमा विकासका प्रयाप्त सम्भावना भएर पनि नेताहरुका अक्षमताले हुन नसक्नु र नागरिकको आर्थिक स्थिति माथि उठ्न नसक्नु यसका कारण हुन् । अहिले एउटा आशालाग्दो पक्ष के देखिएको छ भने मुख्य ठूला पार्टीहरु र त्यसका नेताहरुले अबको बाटो अर्को राजनीतिक क्रान्ति हैन प्राप्त लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै आर्थिक क्रान्ति गरेर नागरिकको जीवनस्तर माथि उकास्ने काममा लाग्नु पर्छ भन्ने चेत आएको छ ।
नेपालीका लागि केही वर्ष अघिसम्म अमेरिका, अस्ट्र्ेलिया वा अन्य देशमा पढ्न जाने कुरो कुलीन वर्गका लागि मात्र सम्भव थियो । तिनै वर्गका, अभिभावकहरुले मात्र अफना सन्तानलाई विदेश पठाउने, पढाउने सपना बोकेका हुन्थे । आज सन्चार जगत् र सूचनाको फड्को मराइका कारण सामान्य मध्यम परिवारका लागि पनि ढोका खुलेको छ । युरोप, अमेरिकालगायत अन्य विश्वका देशहरुमा नेपालीले खर्च तिरेर पढाउने वर्ग त हातका औंलामा गन्नसक्ने मात्र होलान् । अहिले युरोप, अमेरिका पढ्न जो जान्छन् ती पढ्न मात्र जाने हैनन्, तिनले काम गरेर आफैले कमाएर पढ्ने गर्दछन् तर नेपालमा छंदा तिनै युवा कलेज जाने भएपछि अपवादका रुपमा धेरै चाहिं यहां काम गर्न मन पराउंदैनन् । नेपालमा पढाइपछि पास भएको प्रमाणपत्र लिएर के गर्ने भन्ने अन्योल छ । उद्योगधन्दा छैनन्, व्यवसाय गर्न सबैसंग पुंजी नहुन सक्छ । हामीले लिएको प्रमाणत्रले आफना खुट्टामा उभिन सिकाउंदैंन । विकसित देशमा दुइवटै अवसर भएका कारण पनि मानिसहरु विदेश जान मरिहत्ते गर्ने रहेछन् । बिहान बेलुका वा रात्रीकालीन काम गरेर पनि पढाइलाई निरन्तरता दिनसक्ने वातावरण छ । पैसा हुनेले पढाइ मात्र गर्नसक्ने र कमाएर पढ्न पर्नेले काम र पढाइ मिलाएर गर्न पाउने व्यवस्था भएकाले पनि युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा आदि ठाउंमा जान लालयित हुन्छन् । अझ छोरा छोरी भेट्न जाने आमा बावु , वा अन्य परिवारका लागि पनि भाषा कक्षाहरु ठाउंठाउंमा खोलिदिएका छन् ।
जनशक्तिको खांचो भएका देशले १२ कक्षा सरहको अध्ययन गरी पढ्न आफना देशमा भित्रिएका युवालाई पढाइका साथै काम दिएर बस्ने वातावरण बनाइदिएका छन् । १२ कक्षा सरहको दक्ष व्यक्ति उत्पादन गर्न ती देशले ठूलो लगानी पनि गर्नु परेन । अमेरिकाले डिभी मार्फत स्थायी रुपमा बसोबास गर्ने ग्रिनकार्ड दिएर बर्सेनि ५० औं हजार जनशक्ति आफनो देशमा भित्र्याउंछ । अस्ट्र्ेलिया , क्यानडाले पी आर दिएर स्थायी रुपमा बसोबास गर्ने सुविधा दिन्छ । पढ्न जाने बिद्यार्थीहरुलाई पनि नियमित ट्याक्स तिर्ने र नियमानुसार रहनेलाई नागरिक भएर बांच्न पाउने सपना बांडेको हुन्छन् । पढ्न जानेहरु पनि लामो अवधि उतै बसेर स्थायी रुपले बस्न पाउने ग्रिनकार्ड वा पीआर लिन रुचाउंछन् । त्यस्तो अवस्था सिर्जना नहोउन्जेल लामै अवध पनि नेपाल नफर्की उतै विभिन्न तरिकाबाट बस्न रुचाउंछन् । केही नलागे सेनामा भर्ती भएर वा विदेशमा बस्ने आधिकारिक भिसा भएकासंग वैवाहिक सम्वन्ध गांसेर भए पनि प्रायः यता फर्कन चाहंदैनन् । अझ उता पढ्न जानेहरु नेपाल आएर विवाह गर्नुभन्दा उतै बसेकी नेपाली वा अन्यसंग विवाह सम्वन्ध गांस्न चाहनेको संख्या पनि वढ्दो छ । नेपालमा आएर विवाह गर्ने केटा वा केटीले संगै तुरुन्तै आफूसंग लान नसक्ने भएकाले उतै बसेकासंग सम्वन्ध गांस्न पाए छुटिृन नपर्ने र त्यहांको वातावरणमा रमाउन पाउने भएकाले पनि यस्तो रोजाइमा परेको होला ।
पढ्न गएका अधिकांश किन नेपाल फर्कन चाहंदैनन् ? उता स्वतन्त्र समाज, कसैले कसैको चियो चर्चो नगर्ने, नेपाली मिहिनेती, मिलनसार र इमान्दार भएकाले कामका लागि सबैले रुचाउने । भारतीय पाकिस्तानी र भियतनामीहरु समेतले नेपाली कामदारलाई बढी विश्वास गरेको पाइन्छ । कामको अवसर धेरै भएकाले काम पाइसकेपछि बांच्न सहज वातावरण हुने भएकाले पनि अपवादलाई छाडेर अधिकांश मानिस नेपाल फर्कन चाहंदैनन् । अमेरिकामा रहने विद्यार्थीलाई चिल्ला कार, आधुनिक बड०्गाला र डिजिटल सामानको सपनाले लोभ्याउंछ । हरेक कुराको एउटा सिस्टम बसिसकेकाले सिस्टमभित्र चलेपछि कामका लागि नातावाद ,कृपावाद, राजनीतिज्ञ कसैको शरण पर्नु नपर्ने भएकाले पनि होला मानिस उता रमाउने गरेको । जसले जे काम गरे पनि कामप्रतिको सम्मान र निश्चित तोकिएको ज्याला र त्यो ज्यालाले जीवन निर्वाह गर्नसक्ने आफना आवस्यकताका सामान परिपूर्ति गर्नसक्ने, सामान्य काम गर्नेले १० मिनेटको बाटोको काममा जान पनि कार चढेर जान राज्यले कार, घर किन्नेका लागि दिएको सहुलियत सुविधाको वातावरणले पनि विदेश पुगेकाहरु उतै रमाउने गरेको देखिन्छ । तं बाहिरको हामी स्थानीय भन्ने भाव कसैमा देखिदैंन । पसल व्यापारमा नेपाली देखेर ठग्ला, वढी भाउ गर्ला भन्ने छैन । रैथाने होस् वा धनाढ्य सबैका लागि एउटै मूल्य र व्यवहारले पनि मानिसलाई लोभ्याउंदो रहेछ । राज्यद्धारा नागरिकका लागि गरिनुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी बिजुली आदि विनाभेदभाव धनी गरिब सबैका लागि समान हुने । सार्वजनिक यातायातले यात्रुप्रति गरेको आदर सम्मान, समयको पालनको साथै भरपर्दो भएकाले सबैको मन लोभ्याउंछ । पढ्नेका लागि जताततै पुस्तकालयको पर्याप्त व्यवस्था, विद्यालय, सरकारी गैरसरकारी कार्यालय,पसल, रेष्टुरां सबै एउटै सिस्टमले सन्चालन भएकाले पनि कसैले रड०ग वा लिड०ग वा बाहिर भित्रका भएबापत भेदभावपूर्ण व्यवहार व्यहोर्न नपर्ने भएकाले पनि मानिस आकर्षित भएका होलान् । एउटा राज्यबाट अर्को राज्यमा पुग्दा पनि ट्रफिक व्यवस्थापनलगायत बाटो हिंड्नेदेखि किनमेल गर्ने यावत कुरा एउटै पद्धतिमा चलेकाले जता पुग्दा पनि सहज वा अलमलिनु नपर्ने वातावरण देखिन्छ ।
नेपालमा रेमिट्यान्स त खाडी मुलुकमा गएकाहरुले भित्र्याउने हुन् । युरोप, अमेरिका गएकामध्ये थोरैले मात्र नेपालभित्र पैसा पठाउंछन् । खाडी मुलुकमा कमाउने र नेपालमा केही जोहो गर्ने उनीहरुको चाहना हुन्छ भने युरोप, अमेरिका पुग्नेकाको चाहिं उतै कसरी क्रेडिट बनाउने भन्नेतिर लाग्ने हुंदा कमाएको पैसा आवश्यक नभई नेपाल पठाउन चाहंदैनन् ।
अहिले यहां नै मासिक बीस तीस हजार कमाउनेहरु पनि आफना साथीभाइ कतार मलेसिया ,दुबई गएर फर्केको अनि उनीहरुले गरेको मोजमस्ती, मोवाइल ,क्यामरा, घडी आदिको प्रयोगले पनि नेपालमा त्यति पैसा कमाउने युवापुस्तालाई पनि खाडी रास्ट्र् वा मलेसिया भए पनि एकपटक पुगौं भन्ने लहडले धेरै उता पुगेका छन् । जे होस् ती विदेश गएर विभिन्न कामका अनुभव बटुलेर श्रमप्रति माया जगाएर आउंदा उनीहरुका लागि काम गर्न यहां सजिलो भएको छ ।
अब राज्यले अहिलेको डिजिटल प्रबिधिको भरपुर प्रयोग गर्ने र गराउने आम वातावरण नबनाउने हो भने हामी हिजोका दिनमा अन्य देशभन्दा धेरै पछि परेजस्तै अझ भोलिका दिनमा धेरै पछि पर्न सक्छौं । त्यसैले सबै क्ष्ोत्रमा डिजिटल प्रविधिको आम विकास हुनु नितान्त आवस्यक छ । आजका पुस्तालाई यो प्रविधिले युक्त बनाउनुपर्छ । अहिले युवालाई यहां रोजगारी दिन नसकिएकाले राज्यद्धारा उर्जाशिल जनशक्ति बाहिर पठाउने काम भइरहेको देखिन्छ । अव युवा श्रमशक्तिलाई देशमै स्थापित गर्न, प्रतिभा पलायन रोक्न देश आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । सधैं अदक्ष कामदार मात्र दक्षिण कोरिया , मलेसिया, कतार र दुबई पठाएर हुंदैन । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर पठाउन सके मात्र नेपाल र नेपालीको भविष्य रहला । अब राजनीतिका लागि क्रान्ति हैन , आर्थिक क्रान्ति गरेर नेपाली जनजनको मुहार हंसिलो पार्नुपर्छ ।
युवामंच ,असार २०७१ को अंकमा प्रकाशित मेरो लेख यस पटक टांसो गरेर तपाइ सामु आएको छु । जय व्लग ।
तपाईं अहिले कुरैकुरा वर्गको संग्रहहरु हेर्दै हुनुहुन्छ ।